Raspberry Pi OS yakagadziridzwa kune yayo Kurume vhezheni neLinux 5.10 | Linux Vakapindwa muropa
Mumwe mwanakomana anopfuura baba. Zvakanaka, ndinenge ndichive ndisina ruramisiro kana ndikataura izvozvo, sezvo sisitimu yekushandisa yaimbozivikanwa seRaspbian haigone kufananidzwa naDebian, asi yakavakirwa pairi neshanduro yayo yazvino, Raspberry Pi OS 2021-03-04, akatanga kushandisa yazvino LTS vhezheni yekernel pakutanga kwemwedzi uno. Uye kana ndataura "zvimwe" imhaka yekuti zvirinani kuchave neiyo zvakare ichapfuura pane izvi, nekuti pakati paApril Ubuntu 21.04 ichasunungurwa neLinux 5.11 uye Debian 11 inotarisirwa yezhizha.
Idzi ndidzo nhau dzakatipfuura, uye pachangu ndakaona kubva chinyorwa chakabudiswa mune imwe nzira. Iyo kernel yavakaisanganisira haisi Linux 5.11 seUbuntu ichaita, asi Linux 5.10, yakavhurwa pakupera kwa2020 uye iyo mumaforamu mazhinji, senge Reddit, inovimbisa kuti ichashandisa Bullseye (kunyangwe ndisina chokwadi nekuti, parizvino uye kana pasina anoenderera mberi, inongotsigirwa kusvika 2022). Iyo tsanga yakagadziridzwa kazhinji inoguma nekutsigirwa kwakatsigirwa, uye iyo yegumi vhezheni yechishanu dzakateedzana inovandudza rutsigiro rweiyo Raspberry Pi 400, iyo rasipibheri komputa iyo ikozvino inoverenga nyika yekhibhodi fomati zvakanaka.
Raspberry Pi OS Zvinoratidza 2021-03-04
Tsigiro yeNVMe kumidziyo yeSD mune iyo Kodhi Copier zvinoshandiswa.
Iyo yakakurudzirwa software application inoshandura kushandisa GTK 3.
Zvino rova ​​aes-neon-bs crypto mutyairi pane arm64 mamodheru kuti akurumidze OpenSSL.
Chinja mabhatani ekuraira sarudzo mune raspi-gadziriro yekushandisa kuvandudza kuchinjika.
Thonny IDE 3.3.5.
Mitauro yeArmenian neJapan yakawedzerwa pamapakeji akasiyana siyana
Vhidhiyo yekuumbwa sarudzo yabviswa muzvirongwa.
ari Vashandisi varipo vanogona kugadzirisa uye tora mukana weizvi zvese zviri pamusoro nekuvandudza kubva kune imwecheteyo sisitimu yekushandisa. Zvekuisa nyowani, Raspberry Pi OS 2021-03-04 inowanikwa pa Iyi link. Iyo inogona uye inokurudzirwa kuiswa ne Raspberry Pi Mufananidzo, nekuti nekuwedzera pakuve chishandiso chepamutemo, vhezheni yazvino zvakare inotibvumidza isu kugadzirisa zita rezita uye mamwe ma parameter kubva kune ayo matsva epamusoro marongero.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Raspberry Pi OS yakagadziridzwa kune yayo Kurume vhezheni uye ikozvino inoshandisa Linux 5.10
LeoCAD: chirongwa cheCAD dhizaini uchishandisa LEGO zvidimbu